अर्थतन्त्र [Economic] | Nepal's First Co-operative News Portal.
Home अर्थतन्त्र [Economic]
काठमाडौं, २९ पुष । ग्लोबल आइएमई बैंक र एनसीसी बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । यी बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर झण्डै सहकारीको हाराहारिमा पुगेको छ । […]
काठमाडौं, २४ पुष । सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले सहकारीको निक्षेपकर्ता पैसा तिर्नको लागि बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीलाई निरन्तरता दिएका छन् । बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २० लाख […]
काठमाडौं, १८ पुष आईएमई को–अपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडले ४५ जना आमाहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ । आईएमई को–अपरेटिभको १० औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुक्रबार कालिमाटीको सोल्टिमोड स्थिती ‘आमाको […]
सम्पत्तिको स्रोतमात्र खोज्ने परिपाटीले निक्षेपकर्ता बैंकसँग टाढिन्छन्
काठमाडौं, ११ पुस । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा समस्या थपिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान, संस्थागत र क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन र रिपोर्टिङ प्रणालीमा कडाइ […]
११ स्थानमा खुल्दै सहकारी बजार
काठमाडौं, ११ पुस । तरकारी तथा फलफूलको बिक्रीमा बिचौलिया अन्त्य गर्न ६ जिल्लामा ११ सहकारी बजार स्थापना गरिने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय […]
सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै निकाय आवश्यकः अर्थमन्त्री
काठमाडौं, ३ पुस । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नको लागि छुट्टै संस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैकको १६ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै […]
काठमाडौं, २० मंसिर । सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले हरेक नागरिकलाई सहकारीतर्फ आर्कषित गराउन सबै सहकारीकर्मी एकजुट हुन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको […]
काठमाडौं । तपाईं बैंकबाट ऋण लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने खुसीको खबर छ । बैंकहरुको ऋणको ब्याजदर घटेको छ । ब्याज घटेका कारण अब तपाईंले ऋण लिँदा तिर्ने किस्ता […]
पश्चिम नेपालको सहकारी अभियान्ता दामोदर अधिकारी
पश्चिम नेपालमा सहकारीको जग बसाल्ने ब्यक्ति हुन् दामोदर अधिकारी । अधिकारीले सहकारी अभियानमा २६ वर्ष बिताएका छन् । ४२ जना युवा मिलेर २०५० साल असोज ९ गते सिर्जना […]
काठमाडौं, २७ असार राष्ट्रिय सहकारी बैंक, चावाहिल शाखाको संयोजकमा विकल्प पाठक मनोनित भएका छन् । पाठक जोरपाटीमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी […]
काठमाडौं, २१ असार ९७ औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा शनिवार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सातै प्रदेशका उत्कृष्ट सहकारी संस्थालाई सम्मान गरेको छ । उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कारबाट प्रदेश १ […]
काठमाडौं, २४ पुस सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन हुने आधार भनेको सहकारी ऐन हो । तर सबैभन्दा ठूलो कानुन ‘सहकारी ऐन’ उल्लंघन अविभावक निकायले गर्दै आएको खुलेको छ । नेपाल […]
बर्दिया । सिर्जना साकोस, कोशेली साकोस र लक्ष्मी साकोस एकिकरण पश्चात बनेको सिको साकोसको अध्यक्षमा दामोदर अधिकारी चयन भएका छन् । उनी यस अघि र्सिजना साकोसका अध्यक्ष थिए […]
बर्दिया । सिर्जना साकोस, कोशेली साकोस र लक्ष्मी साकोस एकिकरण भै सिको बचत तथा ऋण सहकारी बनेको छ । शुक्रबार एक भव्य समारोह बीच नेफ्सकुनका अध्यक्ष डिवि बस्नेतको […]
काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रका किसानबाट उत्पादित दूधलाई बजारसम्म ल्याउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । डेरी उद्योग संघको नवौँ वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा भूमी व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय […]